संविधानले दिएका पूरै अधिकार कार्यान्वयन हुन सकेन : देउवा !
चितवन,नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले संविधान कार्यान्वयन भए पनि संविधानले दिएका पूरै अधिकार कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउनुभएको छ ।
प्रकाशित : शुक्रबार, असोज २६, २०७५१७:०३
निर्मला पन्तका हत्यारालाई कारवाहीको माग गर्दै बालुवाटार प्रधानमन्त्री निवास अगाडी प्रदर्शन !
नीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न मन्त्री र सचिवहरुलाई ओलीको कडा निर्देशन !
श्रीमती माइत गएपछि आफ्नै छोरीलाई बलात्कार ! पीडितले हजुरआमालाई कुरा लगाएपछि पक्राउ !
यौन दुर्व्यवहारको आरोपमा क्यासिनोका मालिक स्टिभले दिए राजिनामा
जनकपुरमा विवाह पञ्चमीको रौनक , जन्तीको नेतृत्व गरेर आएका उत्तर प्रदेशका मुुख्यमन्त्री योगीको भव्य स्वागत !